Ukuphakamisa isilingi, ukujija imithwalo, Ukuphakamisa ikhonkco - Chenli
Ikhonkco lokuhambisa umbane
Isantya / Pulley / Magnetic
Intambo yocingo yokucinezela umatshini
Inzuzo enkulu enkulu
U-Chenli ukholelwa ngokuqinileyo ukuba uphuhliso ngumgaqo oqinisekileyo. Sithatha imakethi njengesikhokelo, kunye nomsebenzi ophucula ukhuphiswano, ngelixa uncedo oluchanekileyo oluchanekileyo lukhulu kakhulu kwaye luphezulu.Funda ngokugqithisileyo
Umzamo wethu wokusebenzisana usenza sibe sikhulu. UChenli ubandakanya abantu abanetalente abanobuchule kuphando, kulawulo nakwimakethi. Wonke umntu unelungelo eliyimfuneko lokukhuthaza amandla abo. Okuqinisekisa uphando lweshishini kwimveliso enye okanye ezimbini ngonyaka.Funda ngokugqithisileyo
U-Chenli ufumene i-ISO9001, i-CE, i-GS, i-CCS, izatifikethi, ezingaqhelekanga kolu shishino. Ngeli xesha i-inshurensi yethu ye-PICC ifikelela kwi-RMB2000000 yemveliso yeinshurensi minyaka le.Funda ngokugqithisileyo
I-Hebei Chenli Group Co., Ltd.
Iqela leChenli linobuchwephesha bemveliso ekumgangatho ophezulu kunye neqela lolawulo, Inkqubo yolawulo lweflethi yanamhlanje kunye nenkqubo yokusebenza kwenkqubo yetekhnoloji yokuvelisa, igqityiwe ngokusisiseko inguquko kulawulo lolawulo ukuya kulawulo lothintelo.
Ukulawulwa kweshishini kumgaqo
Ukhuseleko oluthe kratya olunokuthenjwa
Ifilosofi yenkonzo yeshishini
Abaxhasi banyanisile ngonaphakade
Ukunyanzelisa ukuphuculwa, ishishini lokuqhekeza iingenelo zolawulo oluphambili, inzuzo yeteknoloji, ukunceda uphawu, uhlala uhlangabezana neemfuno zesiko.
Ukulawula ishishini ngenjongo
Inkokeli yolawulo kumashishini okulawula ubuchule kunye nokuyilwa kwetekhnoloji. Iqela le-Chenli likulungele ukuhlala limi, liya kwenza ukuba abathengi be-brand ye-Chenli babe nobutyebi ngonaphakade.
Igumbi eliyiNtloko eliphantsi kakhulu leGumbi lokuPhakamisa uMbane
HSZ-D Chain phakamisa
I-HSH-X yeLever Hoist
Cinezela KOMATSHINI KOMATSHINI CLH1000
Inkampani enkulu yeqela
Iinkampani ezibalaseleyo ezifikelelekayo
Ukulungiselela ngononophelo, Ukuthwala Unlimited, uKhuseleko nguKumkani
Umlinganiselo omkhulu Uncedo
Isilingi kunye nokufakwa
U-Chenli uphakamisa isilingi ngoku sele ehamba phambili e-China. Kwaye senza iworkshop enkulu kakhulu. UChenli unelayini epheleleyo yemveliso ukusuka kwinto eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo. Iqhubekekisa nganye ine-workshop ezimeleyo, isenza isilingi, umtya we-ratchet, ibhanti yokurhola imoto ukusuka kwi-0.5T ukuya kwi-3000T. Siyakwazi ukugqiba iodolo enkulu ngokukhawuleza.
U-Chenli ngoku uneseti yezixhobo zovavanyo ezifanelekileyo, eziqinisekisa ukuba sinokuqinisekisa umgangatho wesilingi, ukusuka kwi-20T ukuya kwi-3000T, kunye nesilingi, ukusuka kwi-20T ukuya kwi-50T.
Ukujongana nengxaki yezezimali, wonke umthengi usukela eyona nzuzo. Ubungakanani beodolo yethu iphakanyiswe ngama-40% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Kholelwa kumandla eqabane, kholelwa ku-Chenli.
Ukuphakamisa uqinisa luhlobo lwesixhobo esilunge kakhulu, kunokwenza kube lula ukwenza umsebenzi wakho.Chenli ophakamisa uqinisa ungaphantsi komzi mveliso wokunyusa uqinisa we-chenli oyifektri yokuqala. UChenli ubandakanya amanani abasebenzi abaqeqeshiweyo. Umgangatho ophezulu kunye nenkonzo ziqinisekisa abasebenzi ukuba banemeko engcono kunye nokhuseleko. Chenli ephakamisa yamasango uloyiso elihle Pearl River Delta, Yangzi River Delta Region, kummandla mpuma isizathu unobangela yokusebenza eliphezulu ratio ratio.As umthengisi iimpahla ezikhethiweyo, sakha ubudlelwane ishishini elide kunye Shougang Group, Sino-petro. iimveliso: ukuphakamisa izibane uhlobo lwe-SVC, iitroli, iipuli.Sibonelele ngenkonzo ye-OEM eJapan, eFinland njl.
U-Chenli uhlala elandela ukhuseleko kunye nomgangatho wemveliso, kwaye ukhumbuze abasebenzisi kwinkqubo yokusebenzisa banike ingqalelo kukhuseleko.
Amatyathanga aphezulu e-Chenli, sinokuvelisa ngetyathanga, ukuphakamisa (i-hoisiting), itsheyini lam, ikhonkco lezilwanyana, ikhonkco lokunyusa ilifti, ikhonkco levili kunye netyathanga elidityaniswe ngeplastiki njl.njl. Phantse iintlobo ezingama-300, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiinjongo ezahlukeneyo njengokuphakamisa, ukuphakamisa Ukutsala, ukupakisha, okwam, igadi njl.
I-Chenli ivelisa iintlobo zeetyathanga, ezenziwe ngentsimbi ephantsi yekhabhoni. Banophawu oluchaseneyo nefuthe, ukulayisha okuphezulu, amandla, ubungakanani.
I-Chenli G80chain idibana ne-DIN5687, i-DIN5688, imigangatho yaseJamani, i-ISO3076. Sinako ukusebenza umphezulu ngokweemfuno zabathengi '.
Asifuni isikali esihle. Asilandeli ubungakanani beodolo, ukunyaniseka, ngononophelo, ukonwaba, ukuchaneka, umlinganiso ophezulu kakhulu womsebenzi kunye nexabiso, ukufezekisa intengiso yethu. Siza kuhlala sibonisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu, sizama ukubalasela ngakumbi, kwaye siya kubamba izandla kunye nabathengi abaya kwicala elinye, ukufikelela kwinkqubela phambili enkulu.
Rigging nokuphakamisa izixhobo ngokupheleleyo
Izixhobo zoomatshini zingaphantsi komzi-mveliso omtsha waseChenli, Ifumaneka kumbindi wentsimbi ebunjiweyo, kwiphondo lehebebe. Sizibandakanye injineli enamava amashumi eminyaka njengomcebisi wezobuchwephesha. Inyathelo nenyathelo sivelisa izixhobo zoomatshini. Ukusuka kumzobo ngamnye ukuya kupeyinti siphatha onke amanyathelo ngokungqongqo. Imveliso iyasebenza ngakumbi kwaye inexabiso elikhuphisanayo, elizisa ucwangco oluninzi. Kwakulo nyaka sivelisa kwaye sithengise iiseti ezingama-87 zomatshini wokucinezela ngentambo. Izixhobo zoomatshini zikaChenli zisetyenziswe kwisebe elihlukeneyo kwaye zithunyelwa eMalaysia, eSingapore, eIran, eIndiya njl.
Ukubeka umlenze nokuphakamisa ...
Imveliso eshushu - Imephu yendawo Funda ngokugqithisileyo
NO.33 FAZHAN EMPUMA INDLELA, ISITHILI QINGYUAN, BAODING, Hebei, CHINA